Soo-saareyaasha Maska-Weelka N95 iyo Warshadaha - Shiinaha Soo-saareyaasha Maska Mashiinka N95
Maskaxiyaha Mashiinka Xakameeya
Waqtiga Hogaanka: Tirada (Goobaha) 1 - 300> 300 Est. Waqti (maalmo) 10 In laga wada hadlo Tilmaamaha ： Aqoon isweydaarsi wax soo saar ： FAQ: Q1: Ma ku haysataa waji dabool wejiga? J: Waan ka xunahay, malaha maaskaro ku jirta saakay hadda. Warshaddayada waxaa loo habeeyay soosaarista amarradayada ka yimaada macaamiisheena adduunka oo dhan, maaskaro ayaa loo habeeyey si loogu raro macaamiisha la amray. Q2: Ma sameyn karaa amar waji waji waji waji ah? A: Haa, waad samayn kartaa. Warshaddaada ayaa ka mid ah soo-saareyaasha loo xushay inay ka caawiso soo-saarka xukuumadda ...
Mashiinka Neefsashada N 95 Masks
N95 Maska Washable
Maskaxda N95 Maska
Waqtiga Hogaanka: Tirada (Goobaha) 1 - 300> 300 Est. Waqtiga (maalmaha) 10 Si looga wada hadlo Tilmaamaha ： 1. Gudbinta dhibicda dilaaca 2. wasakheynta anti 3. Kahortagga Bacda 4. Bakteeriyada 5. Filter PM2.5, fayras, bakteeriyada, jeermiga, iyo waxyaabaha waxyeelada leh ee hawada ku jira, ilaalin caafimaadka! Codsiga: 1. Codsi: adeegsiga dhismaha, macdanta, dhar-ka-gooshka, dawaynta shiidi. 2. Codsiyada: nolol maalmeedka, warshadaha warshad, SPA-yada, isbitaalada, rugaha caafimaad, iskuulka, meelaha shaqada, iwm. 3. Mar labaad ilaalinta ...
Maska Nakhliyeerka N95 Qeyb ahaan
Maskaxda N95 Duckbill Maska
N95 ee Caruurta
Maskaxda Hargabka N95
Waqtiga Hogaanka: Tirada (Goobaha) 1 - 300> 300 Est. Waqtiga (maalmaha) 10 In laga wada hadlo Tilmaamaha ： 1. Gudbinta dhibicda dilaaca 2. Wasakheynta anti 3. Kahortagga Dust 4. Codsashada Bakteeriyada: 1. Codsi: adeegsiga dhismaha, macdan qodista, dhar-xidhashada, dawada shiidi. 2. Codsiyada: nolol maalmeedka, warshadaha warshad, HBS, isbitaalada, rugaha caafimaadka, iskuulka, meelaha shaqada, iwm. A: pp nonwoven, firfircoon ...
Waqtiga Hogaanka: Tirada (Goobaha) 1 - 300> 300 Est. Waqtiga (maalmaha) 10 In laga wada hadlo Tilmaamaha ： 1. Heerka shaandheynta bakteeriyada: ≥98% 2. Heerka shaandhaynta walaxda wanaagsan: ≥98% 3. Niyad-jabka iska-caabbinta (MM H2O CM2): <5.0 4. Dhiirrigelinta dhiigga: 60 mmHG 5. Dib u dhigista ololka: CL ASS 1 6. Heerka: ASTM 7. Shahaadada: CE FDA FAQ: 1. Waa maxay faa iidada shirkaddaadu? (1) Btter Tayada leh Qiimaha Hoose Waxaan had iyo jeer ku bixinnaa qiime ka wanaagsan isla heer tayo leh, iskuna day ...